Shiinaha Shirkada Soo Saarida Hawada CL-AEA Soosaarka iyo Warshad | Chengli
Wakiilka hawada gala ee CL-AEA
CL-AEA waa Wakiilka Hawada Hawada, maaddada ugu weyn waa rosin, budo cad, milix wanaagsan oo biyaha ah. Nidaamka isku dhafan ee la taaban karo, CL-AEA wuxuu ku soo bandhigayaa hawo shubka, sameynta tiro badan oo goobooyin yaryar ah, oo xiran oo xasiloon, hagaajinta hoos u dhaca la taaban karo, xisaabtanka iyo balaastigga.
Caddaan ama budo huruud khafiif ah, aan cakeynin
Arrin firfircoon (%)
Batroolka Ether-ka ayaa lagu milmaa (%)
Milixda aan dabiici ahayn (%)
Waxaa loo adeegsaday wadada laamiga ah iyo buundada, shaqeynta sare ee injineernimada la taaban karo, shubka shubka, loo isticmaalo cimri dhererka sare ee dhismayaasha shubka, biyo xireenka, wadada weyn, warshadda qaboojinta warshadda korantada, biyaha Haydarooliga, dekedda, iwm.
Qiyaasta: 0.01% ～ 0.03%, xaddiga ugu dambeeya sida ku cad tijaabada wax ku oolka ah.
Hagaajinta hoos u dhaca la taaban karo, xisaabtanka iyo balaastigga.
Yaree dhiigbaxa iyo kala soocida shubka, hagaaji isku mid ahaanta shubka.
1. Hagaajinta awoodda jilicsanaanta ee la taaban karo, marka ay hawadu ka kooban tahay 3% ilaa 5%, xoogga dabacsanaanta ayaa kordhay 10% - 20%.
2. Wakiilka isku-darka hawo-isku-dhafka oo leh qalab jilicsan oo hooseeya, qallafsanaan yar, dabacsanaan wanaagsan.
3. Faafitaanka kuleylka iyo isugeynta isku dheelitirka ee la taaban karo waa la dhimay, wuxuu xoojinayaa xasiloonida mugga ee la taaban karo, si kor loogu qaado cilmiga hawada, cimri dhererkiisana u gaarsiiya nolosha wadada la taaban karo.
4. Si weyn buu u hagaajiyaa caabbinta dhaxan la taaban karo, caabbinta milixda, iska caabbinta permeability, iska caabbinta weerarka sulfate iyo caabbinta waxqabadka jawaabta.
Hore: Kaalshiyam lignosulfonate
Xiga: CL-DA waa wakiilka wasakhaynaya
CL-DA waa wakiilka wasakhaynaya